एडोब इलस्ट्रेटरको साथ चरणमा चरण लोगो बनाउने क्रिएटिव अनलाइन
कसरी चरणबद्ध चरण Adobe Illustrator साथ लोगो सिर्जना गर्ने
लोला करील | | Illustrator, ट्यूटोरियलहरू
लोगो एक ब्रान्डको सब भन्दा प्रतिनिधि दृश्य तत्वहरु मध्ये एक हो, यो यसको सार के हो सार्वजनिकमा प्रसारण गर्न सक्षम छ र यो एक धेरै शक्तिशाली प्रतीक हो। यस ट्यूटोरियलमा म तपाईंलाई आधारभूत उपकरणहरू देखाउँछु जुन इलस्ट्रेटरले लोगो डिजाइनको लागि प्रस्ताव गर्दछ र म तपाईंलाई तिनीहरूबाट कसरी अधिक लिने भनेर सिकाउनेछु। यदि तपाईं एडोब इलस्ट्रेटरको साथ लोगो कसरी सिर्जना गर्ने भनेर जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं यो पोष्ट मिस गर्न सक्नुहुन्न!
1 लोगो, isotype वा imagotype
2 इलस्ट्रेटरमा नयाँ कागजात सिर्जना गर्नुहोस् र मोडललाई अवलोकन गर्नुहोस्
3 एडोब इलस्ट्रेटरमा सबै आवश्यक आकृतिहरू सिर्जना गर्नुहोस्
3.1 उल्लूको शरीर
3.2 उल्लूको आँखा
3.3 नक्कल गर्नुहोस् र अर्को आँखा सिर्जना गर्न फ्लिप गर्नुहोस्
3.4 पाथफाइन्डर वा कलम उपकरणको साथ प the्क्ति सिर्जना गर्नुहोस्
4 इलस्ट्रेटरमा तपाईंको लोगोका लागि रंग र ग्रेडियन्ट
5 लोगोमा टाइपोग्राफी
6 एडोब इलस्ट्रेटरमा फन्टहरू कसरी अनुकूलित गर्ने
7 फोटोशपमा मकअपहरूको साथ तपाईंको लोगोहरू परीक्षण गर्नुहोस्
लोगो, isotype वा imagotype
सामान्यतया, हामी शब्द लोगो प्रयोग गर्छौं प्रतीकलाई जनाउँछ जुन ब्रान्डलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यद्यपि यो शब्द पूर्ण रूपमा राम्रोसँग प्रयोग भएको छैन। हामीले डिजाईन सुरु गर्नु अघि, यसलाई सफा गरौं
El लोगो प्रतीक हो जुन ब्रान्डलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र बनेको छ छवि र पाठ (वा टाइपोग्राफी)।
जब प्रतीक केवल बनेको हुन्छ छवि, पाठ छैन, यो शब्द प्रयोग गर्न अधिक सहि छ isotype.
त्यहाँ ब्रान्डहरू छन् कि कहिलेकाँही आफ्नो लोगो को बिभिन्न भागहरु स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्दछ। उदाहरण को लागी, नाइके अक्सर केवल द्वारा प्रतिनिधित्व गरीन्छ Swoosh। जब लोगो छवि ब्रान्डसँग सम्बन्धित छ टाइपोग्राफीको साथ बिना आवाश्यक, हामी यसको रूपमा सन्दर्भ गर्न सक्छौं इमेजोटाइप।
इलस्ट्रेटरमा नयाँ कागजात सिर्जना गर्नुहोस् र मोडललाई अवलोकन गर्नुहोस्
एक बनाऔं नयाँ कागजात। हामी कार्य तालिका एक दिन्छौं A4 आकार, यसैले हामीसँग काम गर्ने ठाउँको अभाव हुनेछैन। मैले परिवर्तन गरेको छु RGB लाई रंग मोड.
हामी पहिले डिजाइन गरेको साधारण लोगोबाट सुरू गर्नेछौं। यस मोडललाई हेरेर हामी हेर्नेछौं चरण-चरण चरण मैले यसलाई कसरी सिर्जना गरेको र के उपकरणको साथ। उनीहरु लाई यो छ कि तपाईले इल्स्ट्रेटरले के प्रस्ताव राख्नुहुन्छ त्यसबाट कसरी अधिक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे तपाईले एउटा विचार पाउनुहुन्छ। लोगो विच्छेदन गरेर, हामी त्यो देख्छौं यो संयुक्त आकार र पाठको सेट मिलेर बनेको छ।
एडोब इलस्ट्रेटरमा सबै आवश्यक आकृतिहरू सिर्जना गर्नुहोस्
आकारहरूमा ध्यान केन्द्रित गरौं। उपकरणपट्टीमा, तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ आकार उपकरण। यसमा क्लिक गरेर यसले हामीलाई आयतहरू, दीर्घवृत्त, तारा, बहुभुज वा रेखा खण्डहरू सिर्जना गर्ने विकल्प दिन्छ। यस अवस्थामा हामीलाई चाहिन्छ आयत बनाउनुहोस्। उपकरण चयन गर्नुहोस् र माउस तान्दै आयत बनाउनुहोस् जुन लगभग मापनहरू हुन् जुन तपाईं माथिको छविमा देख्नुहुनेछ।
हामी कसरी यो आयतबाट आकारमा जान्छौं जुन उल्लूको शरीर बनाउछ? हामीले यसलाई तान्न आवश्यक छ, र यसको लागि हामीसँग छ प्रत्यक्ष चयन उपकरण उपकरणपट्टीमा। जब तपाइँ यसलाई चयन गर्नुहुन्छ, तपाइँ देख्नुहुनेछ कि आयतको कुनामा एउटा प्रकारको ह्यान्डलरहरू (सर्कलहरू) यदि तपाईं तिनीहरू मध्ये कुनैमा सिधा तान्नुभयो भने तपाईंले देख्नुहुनेछ कि कुनाहरू गोलो भयो। एकल कुना तान्नको लागि, एकचोटि मात्र क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तान्नुहोस्। तपाईले देख्नुहुनेछ कि त्यो कुनामा सार्छ र बाँकी रहे जस्तो गरी।
हामी तल्लो बायाँ कुनामा शुरू गर्दछौं, हामी ह्यान्डललाई सीमामा लैजान्छौं। हामी माथिको बाँया पट्टि जारी राख्नेछौं र अन्तमा हामी माथिल्लो दायाँ गोल गर्दछौं। यस तरिकाले तपाईले चाहेको आकार पाउनुहुनेछ।
मोडेललाई नजिकबाट हेर्नको लागि चौडा। आँखा शरीर जस्तै आकार बाट बनेका छन् र दुई सर्कलहरूका लागि, एक अर्को भित्र। हामी एक सिर्जना गर्नेछौं सानो आयत र हामी यसलाई तान्न सक्छौंयो हामी अघिल्लो चरणमा गरे जस्तो छ। अब हामी सर्कलहरू सिर्जना गर्ने छौं। चयन गर्नुहोस् इलिप्स उपकरण। उत्तम सर्कल सिर्जना गर्न हामीले कुञ्जी थिच्नु पर्छ तान्ने क्रममा सिफ्ट गर्नुहोस्, अन्यथा यसलाई विकृत गर्न सकिन्छ र वृत भन्दा अण्डाकारको बढी हुन सक्छ।
एक पटक हामीसँग आँखाका सबै तत्वहरू छन्, यो भेला हुने समय हो। कुनै पनि डिजाइन कार्यको लागि तपाइँ इलस्ट्रेटरमा गर्नुहुन्छ पign्क्तिबद्ध उपकरण आधारभूत छ। तपाईंसँग यो दृश्यात्मक नहुन सक्छ, तपाईं यसलाई जहिले पनि पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ विन्डो>लाईन अप गर्न। यसले स्वचालित रूपमा तपाइँलाई विभिन्न तत्वहरू पign्क्तिबद्ध गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं आर्टबोर्ड, चयन, वा कुञ्जी वस्तु सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। प al्क्तिबद्ध गर्न तपाईंले धेरै वस्तुहरू रeचयन गर्नुपर्नेछएक पign्क्तिबद्ध विकल्प छनौट गर्नुहोस्। यदि तपाईं सन्दर्भ वस्तु छनौट गर्न चाहानुहुन्छ भने, छनौट गर्नुहोस् र कुनै कुञ्जी थिचे बिना तपाई कुञ्जी वस्तुमा रूपान्तरण गर्न चाहानु भएको वस्तुमा क्लिक गर्नुहोस्। हामी शिशुलाई आँखाको बाहिरी भागमा केन्द्रित गर्नेछौं।
नक्कल गर्नुहोस् र अर्को आँखा सिर्जना गर्न फ्लिप गर्नुहोस्
यदि तपाईंले याद गर्नुभयो भने, अर्को आँखा ठ्याक्कै उस्तै हो तर विपरीत स्थितिमा। सम्पूर्ण प्रक्रिया दोहोर्याउनको लागि क्रममा, हामी के गर्छौं डबल पहिले नै सिर्जना गरिएको। तपाईं यसलाई कमाण्ड + सी (प्रतिलिपि) र त्यसपछि आदेश + v (टाँस्नुहोस्) को साथ गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईं छनौट गर्न सक्नुहुनेछ विकल्प कुञ्जी थिच्नुहोस् र तान्नुहोस्। यसलाई उल्टाउन, यसमा क्लिक गर्नुहोस्, र गुण प्यानलमा, "रूपान्तरण" सेक्सनमा, माथिको छविमा संकेत गरिएका प्रतीकहरूमा, तपाईं आकार फ्लिप गर्न सक्नुहुन्छयस अवस्थामा हामीलाई तेर्सो हुनु आवश्यक छ।
पाथफाइन्डर वा कलम उपकरणको साथ प the्क्ति सिर्जना गर्नुहोस्
अब ठूलो आकारमा फर्कौं, तपाईले देख्नुहुनेछ यसको एक पखेटा छ। यो वास्तवमा उही आकार हो जुन हामी शरीरको लागि प्रयोग गर्छौं, पछाडि राखिन्छ र फर्कन्छ। मँ यो अवसरको लागि व्याख्या गर्ने छु लोगोहरू सिर्जना गर्नका लागि दुई सुपर उपयोगी उपकरणहरू: कलम उपकरण र पाथफाइन्डर।
La कलम उपकरण तपाईंसँग यो उपकरणपट्टीमा छ र यो पखेटा सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको प्रयोग धेरै सरल छ। केवल शिरोबिन्दुहरू सिर्जना गर्न क्लिक गर्नुहोस् र लाइनहरू स्वचालित रूपमा तिनीहरूसँग जोडिन कोर्न तैयार हुनेछन्।
पखेटा बनाउने अर्को तरिका पाथफाइन्डर प्रयोग गरेर हो। यदि तपाईंसँग यो दृश्यात्मक छैन भने, तपाईंले यसलाई विन्डो ट्याब> पाथफाइन्डरमा फेला पार्नुहुनेछ। यस उपकरणको साथ तपाईं भागहरू संयोजन गर्न वा घटाउन सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा हामीले विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ: अगाडि कम फ्रन्ट। शरीरको आकार नक्कल गर्नुहोस्, पखेटा बनाएर पछाडि राख्नुहोस् र फेरि नक्कल गर्नुहोस्, अगाडि कम प्रेस गर्नुहोस् र अधिक मेटाउनुहोस्। हामीसँग पहिले नै हाम्रो वि wing्ग हुन्छ। सबै आकारहरू सिर्जना भएपछि, तपाईं लोगो भेला गर्न सक्नुहुन्छ।
इलस्ट्रेटरमा तपाईंको लोगोका लागि रंग र ग्रेडियन्ट
अहिले सम्म हामीले रंगको सवालमा छुनु सकेनौं। यो महत्त्वपूर्ण छ कि जब तपाईं आफ्नो लोगो डिजाइन गर्नुहुन्छ तपाईं रंगमा ध्यान दिनुहुन्छ, टोनहरू छनौट गर्नुहोस् जुन ब्राण्डको भावनालाई समेट्छ र प्रतिनिधित्व गर्दछ। मैले गुलाबी रंग छानेको छु, मँ माथी रंग कोड छोड्नेछ यदि यसले तपाईंको लागि काम गर्दछ भने। आँखा भरिएन, तिनीहरू २.0,25 मोटाईको सेता रेखा हुन्।
शरीरको गुलाबी भाग चपटा रंग होइन, यसमाaछ अपमानित। त्यहाँ लोगोसँग विवादास्पद रायका साथ विवादास्पद रायहरू छन्। तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नु अघि यो जोखिम थियो किनकि ढाँचा हराउन सक्छ वेबमा अपलोड गर्दा। यद्यपि यो समस्याबाट पार पारिएको हो। धेरै ब्रान्डले तिनीहरूको लोगोमा ब्रान्डियन्टहरू प्रयोग गर्दछ, ब्रान्डहरू इन्स्टाग्रामको रूपमा मान्यता योग्यको रूपमा। म व्यक्तिगत रूपमा तिनीहरूलाई मन पराउँछु किनभने यदि उनीहरू राम्रोसँग प्रयोग गरीन्छन् भने उनीहरूले लोगोमा भोल्युम थप्दछन्।
ग्रेडिएन्टहरू लागू गर्न, हामीले ग्रेडीएन्ट उपकरण चयन गर्नुपर्नेछ र वस्तुमा डबल क्लिक गर्नुपर्नेछ। कुञ्जीपाटीमा G थिच्नुहोस् र डबल क्लिक गरेर हामी सर्टकट गर्न सक्छौं। गुण प्यानलमा, ढाँचामा, तपाईं ढाँचाको प्रकार छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र मेनु प्रदर्शन गर्न यसलाई तीन विन्दुहरूमा परिमार्जन गर्न। यस अवस्थामा हामीले एउटा ग्रेडीएन्ट छनौट गर्दछ जुन कालोबाट सेतोमा जान्छ र हामीले कालोलाई गुलाबी र सेतोमा परिवर्तन गर्यौं जुन हामी एकदमै हल्का गुलाबी, लगभग सेतामा बदल्ने छौं। आकार र बिन्दुहरूमा देखा पर्ने पट्टीलाई सार्दै, तपाई ग्रेडिएन्टको स्थिति र संरचना परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ।
पाठमा कुनै जटिलता छैन, यो ओस्वालेड मध्यम फन्टको साथ लेखिएको छ, जुन तपाईं गुगल फन्टमा नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यसलाई १ points बिन्दुको आकार दिएका छौं र हामीले उही गुलाबी टोन छनौट गरेका छौं। यो यस्तो देखिन्छ!
एडोब इलस्ट्रेटरमा फन्टहरू कसरी अनुकूलित गर्ने
टाइपोग्राफीको बारेमा बढी कुरा गरौं! फन्ट स्ट्रोकमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, ब्रेक, विकृत र हामी तिनीहरू संग खेल्न सक्छौं। म यो गर्न एकदम अनिच्छुक छु, तर हे, लोगो सिर्जना गर्न राम्रो स्रोत हो र तपाईंलाई यो जान्नु पर्छ। एउटा उदाहरण हेरौं:
फाइल कालो फन्ट छनौट गरौं, र म यो नाम लेख्न गइरहेको छु। यो अहिले छ, हामी यो गर्न को लागी थोरै छ। हामीले टाइपोग्राफी स्ट्रोकमा रूपान्तरण गर्नु पर्छ। त्यसको लागि, हामी यसलाई चयन उपकरणको साथ चयन गर्दछौं, र पाठ ट्याबमा जान्छौं> रूपरेखा सिर्जना गर्नुहोस्। यो गर्नुभन्दा पहिले, निश्चित गर्नुहोस् कि पाठ राम्ररी लेखिएको छ, किनकि तपाईं अब यसलाई सम्पादन गर्न सक्षम हुनुहुने छैन!
रूपरेखा बनाएर, तपाईं आफ्नो पाठलाई अन्य इलस्ट्रेटर स्ट्रोकले जस्तै व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हामीले आकारहरूसँग गरेका थियौं, सिधै चयन टूलको साथ हामी आईको अन्त्य र दोस्रो “i” को बिन्दु घुमाउँदैछौं, हामी यसलाई एक किसिमको पातमा रूपान्तरण गर्नेछौं, जुन म यसलाई दिन गइरहेको छु। फ़िरोज़ा टोन। चाखलाग्दो कुरा यो हो कि सम्पूर्ण शब्द लोगो वा “i” को रूपमा स्वतन्त्र छवि प्रकारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछ।
फोटोशपमा मकअपहरूको साथ तपाईंको लोगोहरू परीक्षण गर्नुहोस्
एक राम्रो विचार यदि तपाइँको लोगो कार्य गर्दछ फोटोशप संग मकअपहरू सिर्जना गर्न को लागी हो भनेर। यो वास्तविकतामा कसरी देखिन्छ र यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर छिटो हेर्ने उत्तम तरिका हो। तपाइँ के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी चरणबद्ध चरण Adobe Illustrator साथ लोगो सिर्जना गर्ने
डोमेस्टिका छात्रवृत्ति २०२१ ले सबै रचनात्मकलाई १० छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ जुन उनीहरूको उत्कटतालाई भविष्यमा बदल्न चाहन्छ
फोटो सम्पादन गर्न सबै भन्दा राम्रो प्रोग्रामहरू